Barron's DAT Review [AKHRI hor inta aadan gadan!]
Burron Course Burburka Koorsada Barron
The Barron ee Test Admission Ilkaha buugga la qoray by dhowr ilkaha oo markii ugu horaysay dib u sii daayay 1999. Ka dib markii ay sii daayo waxa ay mid ka mid ah buugaagta dib u eegis dheeraad ah oo caan ah oo DAT noqday. Arday badan ayaa laga helay in ay ku caawin ee sharxaya fikradaha muhiimka ah iyo waxa helay amaan badan, waayo, wax ay dib u eegis PAT.
Muddo, si kastaba ha ahaatee, sida qalabka kale ee dib u eegista DAT ayaa lagu sii daayay in ay yihiin khayraadka ka xoogbadan, Barron ee ay caanka ah ee Barron ayaa yaraadey. Inkastoo qaar ka mid ah ay weli u arkaan in ay waxtar leh oo racfaan sida wax u eegis loogu talagalay DAT ah.
Barron ee DAT waa il dib u eegis dhamaystiran oo ka kooban 512-page buugaagta iyo a CD-ROM. buugaagta waxay bixisaa talo imtixaanka-qaadashada, sharaxaada waxbarashada ilkaha iyo dhaqanka ee ilkaha, dib u eegista dhammaan mawduucyada DAT, iyo laba imtixaan oo dhererkiisu buuxa oo ay la socdaan jawaabaha iyo sharaxaad. The CD-ROM ka mid ah laba imtixaan oo dhererkiisu buuxa oo dheeraad ah oo ay la socdaan dhaliyay si toos ah iyo sharaxaad in jilo DAT dhabta ah.
Halkan waa dulmar a faahfaahsan oo dheeraad ah waxa buugga ku jira:
Cutubka 1 Hordhac
About DAT ah
Fiiro gaar ah A si ay u Ardayda Canadian
Art ee Test Qaadashada
Cutubka 2 Waxbarashada ilkaha iyo Practice
The Mihnadda ee Ilkaha
Cutubka 3 Survey of Dabiiciga Sciences-eegista
Cutubka 4 Kartida garasho Review Test
Cutubka 5 Reading fahamka Test Review
Cutubka 6 Sabab u tiro Review Test
Cutubka 7 Model Imtixaanka A
Cutubka 8 Model Imtixaanka B
Soo gaabinta magacyada
Shaxda wakhtiyeysan ee Qaybaha ah
List of Qaybaha la Calaamooyinka waxay
Shaxan Tixraaca waayo, Chemistry
Markii ugu horeysay ee la sii daayay kitaabkan ahaa ka mid ah ardayda pre-ilkaha aad loo jecel yahay oo waa lagu badan ee la isticmaalo buugga dib u eegis Kaplan ee isku diyaarinaya DAT ah. Waxaana ay ku aaddan qaybta kasta oo imtixaanka iyo xeeladaha ka badan imtixaanka-qaadashada iyo sidoo kale sharaxaad ka mid ah fikradaha ka badan buugga dib u eegis ku sameeyey Kaplan. Waxaa la abaabulay wanaagsan iyo user more saaxiibtinimo ka badan buugga dib u eegis Kaplan ayaa. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ilaa xad si caadi ah ay wax u eegis PAT taas oo ahayd dhammeeystiran oo waxtar badan ugu qalabka kale ee dib u eegis waqti.
Hadda, si kastaba ha ahaatee, kitaabkan aan la isticmaalo sida ugu badan ay sabab u tahay khayraadka xoogbadan kale laga heli karaa maanta. Waxaa jira sababo badan sababta kitaabkan aan la isticmaalo sida ugu badan oo aan si weyn lagu talinayaa.
Buuggan waxaa la ciiraya qaladaad, naxwaha iyo macluumaad, oo dhan of imtixaan ee tijaabada ah. Waxaa jira qaladaad cad cad iyo kuwa kale oo aan laga yaabaa in sida iska cad. Waxay u dhawdahay inay u muuqataa sida haddii daabacayaasha ma xitaa dhibaato in ay proofread iyo edit kitaabka; xataa edition labaad, edition ugu dambeeyey, waxaa ka buuxa qaladaad. Waxaa ka tagi doono ardayda badan madaxooda ka yaabban xoqidda haddii ay khaldan yihiin ama haddii ay buugga. Buugani wuxuu noqon lahaa mid aad u walaac badan iyo wareer in la isticmaalo haddii aan la isticmaalayo qalab kasta oo dib u eegis dheeraad ah u leh si ay u aqoonsadaan qaladaad iyo in aan la marin habaabiyo.
Imtixaanada dhaqanka ka mid ah buugaagta iyo CD-ROM, oo aan ka fiirsaneysa inay khaladaad ah, waa wax yar ka sahlan ee qaybta kasta oo ka badan DAT dhabta ah. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh, sababtoo ah waxay ku siin doonaa tababar dheeraad ah oo had iyo jeer waa faa'iido. Laakiin waxaa jira waxyaabo fiican iyo si ka sii wakiil halkaas in ay isticmaalaan.
Barron ee buugga DAT iyo CD-ROM waxay noqon kartaa mid waxtar leh soo sharaxay fikradaha muhiimka ah oo aad la siinayo xeeladaha imtixaanka-qaadashada waxtar u DAT ah. Waxa ay shaqo fiican bixinta dulmar toos ah oo ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan ee mawduuca kasta; dheeraad ah sida hage tixraac oo deg deg badan buug dib u eegis qoto-dheer. Waxaa jira talooyin wanaagsan PAT ah in uu noqon karaa waxtar u dhaliyay sare ee qaybtan, laakiin waxba taariikhi in aad ka baran karaa in qalabka kale ee dib u eegis.
Inkastoo ay aad u raqiis ah oo la awoodi karo, Waxaan aadka aan kugula talin karaan ilo dib u eegista ay sabab u tahay qalad badan oo dhexdeeda keeni doonaa stress iyo wareer badan-la rabin. Haddii aad go'aansato in aad u isticmaasho in diyaarinaya DAT ka dibna waxaan u isticmaali lahayd sida il dib u eegis dheeraad ah oo aan kaliya ku tiirsan lahaa ku dul. u isticmaalaa in aan dib u eegi fikradaha iyo haddii aad doorato in aad hesho tababar dheeraad ah ka dibna iska jira khaladaad ah in aad la kulmi doonaan.
Barron ee burburka DAT Course Review
EE Barron DAT FALANQAYNTA
1. Popular ka mid ah Ardayda Pre-Ilkaha
2. Caadi ahaan loo isticmaalo Iyadoo Kaplan Review Book
3. Xeeladaha Test Qaadashada Great